စကားပြောခွင့်ပြုမည့်ပဲရစ်မြို့၏ထူးခြားချက် ၁၀ ခု | ခရီးသွားသတင်း
မော်နီကာဆန် | | ယေဘုယျ, ပဲရစ်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ပဲရစ်မြို့တော်သည်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် ကမ်းလှမ်းဖို့အများကြီး။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောရာသီဥတုကိုခံစားရင်းလူစုလူဝေးတွင်သို့မဟုတ်မြို့တော်ကိုအလှဆင်သည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအဆောက်အအုံများတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးရန်စိတ်စွဲလမ်းစရာနေရာများ။
၁၀၅ စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီးဘယ်နေရာထောင့်မှာမဆိုအံ့ဖွယ်အမှုများများစွာနဲ့အတူရှိနေမှာပါ P ကို၏ 10 သိချင်စိတ်arís ငါပြောအံ့သောငှါသင်တို့ကိုငါမသိ။
2 Liberty ၏ရုပ်ထုသုံးခုရှိပါသည်။
3 နံနက်စာစားရန်၊ ပြီးတော့နေ့လယ်စာနဲ့ညစာအတွက် ...
4 ပဲရစ်ကိုguရာမ guillotine နဲ့မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်လား။
5 လက်တင်ရပ်ကွက်, လေထုနှင့်အတူအများဆုံးနေရာ
6 Notre Dame ၏စတုရန်းကီလိုမီတာသုည
7 ပဲရစ်တွင်ခရိုင် ၁၃ ခုရှိခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်
8 အဆိုပါ Louvre ပြတိုက်၏လိမ်လှေကား
9 Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနက်နဲသောအရာ
10 နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ အနုပညာတစ်ခု
Louvre ပြတိုက်ပိရမစ်ကိုဗိသုကာ Ieoh Ming Pei မှဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အမြင့် ၂၀.၁ မီတာနှင့်စုစုပေါင်းအလွှာ ၆၇၃ ပြားရှိသည်။ အလေးချိန် ၁၈၀ ရှိပြီးအလေးချိန်မှာအီဂျစ်နိုင်ငံ၊ Cheops ပိရမစ်တွင် ၅၁ ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် တူညီတဲ့အတိုင်းအတာရှိပါတယ်.
အကျော်ကြားဆုံးသောသူမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မန်ဟက်တန်ကျွန်း၏တောင်ဘက်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြင်သစ်တွင်ပုံတူနှစ်ခုရှိသည် - ကော်လ်မာတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုမှာပါရီတွင်ဖြစ်သည်။ Swan ကျွန်းပေါ်မှာ။ ဒီပန်းချီကားကိုအီတလီ - ပြင်သစ်အနုပညာရှင် Auguste Bartholdi ကဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ၁၈၈၉၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
နံနက်စာစားရန်၊ ပြီးတော့နေ့လယ်စာနဲ့ညစာအတွက် ...
တစ်စုံတစ် ဦး ကပဲရစ်လူမျိုးတွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါင်မုန့်နဲ့ဒိန်ခဲကိုစားတယ်၊ မင်းတို့မယုံဘူးလို့ပြောတာကြားဖူးတယ်၊ မင်းမှားတယ်။ သူတို့အတွက်, ဒီနှစ်ခုအစားအစာများကိုအခြေခံဖြစ်ကြသည်သူတို့ဟာအကောင်းဆုံး baguettes နှင့်အကောင်းဆုံးဒိန်ခဲရရန်အလွန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်အောင်အများကြီး။ ထိုသူတို့ကလောလောလတ်လတ်လုပ်နေကြတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းသော ... !
ပဲရစ်ကိုguရာမ guillotine နဲ့မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်လား။
ဆောက်လုပ်ရန်အနည်းငယ်သာကျန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၁၈၈၉ ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြပွဲအတွက်workရာမအလုပ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်မြို့၏ခြေရာခံများဖြစ်လာနိုင်သည်။ သည်အခြားအဆိုပြုချက်များထဲတွင်၏ရှိ၏ ၂၇၄ မီတာမြင့်သော guillotine တစ်ခုတည်ဆောက်ပါဤအလေ့အကျင့်မှပြင်သစ်ရဲ့အလှူငွေအထိမ်းအမှတ်ရန်။ ကံကောင်းတာကအဆုံးမှာတော့ Eiffel Tower ကိုဆောက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကဘာမှမတတ်နိုင်သောအရာဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောတန်ဆာဆင်တန်ဖိုးရှိသည်။
၎င်းသည် Ile de la Cité၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးသက်ရှိထင်ရှားသည့်ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလယ်ခေတ်ခေတ်တွင်လက်တင်စကားပြောသောကျောင်းသားများနေထိုင်ကြသည်။ ဒါဟာဒီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည် ၁၉၆၈ မေတော်လှန်ရေးအတွင်းအစက်အပြောက်များယနေ့ခေတ်၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်သောရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များကသင့်အားထိုင်။ အနားယူရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Notre Dame ၏စတုရန်းကီလိုမီတာသုည
၎င်းသည်ပြင်သစ်၏ဗဟိုမဟုတ်၊ ပဲရစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဒီအမှတ်ကနေ Point Zéroမှသူတို့ခေါ်တဲ့ သငျသညျမွို့၌ရှိသမျှသောလမ်းများ၏အကွာအဝေးတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ဒေသတွင်း၌ထိုသို့ခြေကျင်သွားသူများသည်ပြန်လာဖွယ်ရှိသည်ဟုမကြာခဏဆိုလေ့ရှိပြီးကံကောင်းခြင်းသည်သူတို့နေထိုင်စဉ်အတွင်းသူတို့နှင့်အတူလိုက်ပါလိမ့်မည်။
ပဲရစ်တွင်ခရိုင် ၁၃ ခုရှိခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်
နံပါတ် ၁၃ သည် (ယနေ့ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုများစွာ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရဖြစ်သည်) ကံမကောင်းအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ၁၇၉၅ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအတွင်း ၁၂ နှင့် ၄၈ ခွဲခွဲများတည်ထောင်ခဲ့သည် သူတို့တစ်တွေထပ်မတည်ထောင်ချင်ကြဘူး ထိုမြို့သည်ကျေးဇူးတော်မှကျလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာခရိုင် ၂၀ ရှိပြီးအရင်ကထက်ပိုပြီးရှင်သန်နေလို့ပါ။
အဆိုပါ Louvre ပြတိုက်၏လိမ်လှေကား
Louvre ပြတိုက်တွင်လှပသောလှေကားထစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမျိုးအစားတွေရှိတယ်၊ သူတို့မှာမတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိသလား။ ၎င်းသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုများစွာဆွဲဆောင်သောဒြပ်စင်များဖြစ်ပြီးအလွန်ကျော်ကြားသောဗိသုကာပညာရှင်သည် ၁၀ နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့သည်။ ယခုသူသည်အထင်ကြီးလောက်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးသူ၏ဇာတ်လမ်း၊ သူတို့တွင်ရှိသောအရေးပါပုံ၊ သူအောင်မြင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းနှင့်အခြားအရာများကိုပြောပြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ဗိသုကာ Alberto Sanjurjo ၏ပါရဂူဘွဲ့.
Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနက်နဲသောအရာ
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံး Gothic ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ပါရီမြို့ရှိအထင်ရှားဆုံးသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Ile de la Citéတွင်တွေ့နိုင်သည် ချစ်သူ ခေါင်မိုးပေါ်မှရေကိုထွက်ခွာသွားစေပြီး၊ Joan of Arc သည်သစ်တိုင်တွင်မီးလောင်နေသောညကိုသူတို့နိုးလာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Bonjour (သို့) Bonsoir ကိုပုံမှန်အသံဖြင့်ပြောရန်မလုံလောက်ပါ အများကြီးလေ့ကျင့် ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှသဘာဝကျကျထွက်လာနိုင်အောင်။ ပါရီလူမျိုးများသည်မိမိတို့၏ဘာသာစကားကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်သူတို့ကိုအပြည့်အ ၀ နှုတ်ဆက်ပါကလုံးဝစုံလင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ သင်သည်သူတို့နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုငါအာမခံသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ပဲရစ် » သင့်ကိုစကားအချေါပြောနိုင်မယ့်ပဲရစ်၏သိချင်စိတ်များ
Santa Lucia နွေရာသီတစ်နှစ်လုံး